मुलुक फेरि एकपटक संगीन मोडमा उभियो « News24 : Premium News Channel
मुलुक फेरि एकपटक संगीन मोडमा उभियो
नेपालको राजनीतिको इतिहास वास्तवमा सुखद कहिल्यै रहेन । सत्ता दाउपेचका दुर्दान्त कथाहरु कोरिएका छन् यो मुलुकमा । चीन र भारत भन्दा अघि नाम कमाएको यो मुलुक अहिले उनीहरुले नाम कमाउदा गुमनाम झै बनेको छ । कारण उही हो – अस्थिर राजनीतिक शक्ति र देशप्रतिको प्रतिबद्ध राजनेताको अभाव । मुलुक फेरि आएर एक पटक संगीन मोडमा उभिएको छ । सत्ताको दाउँपेचको फोहरी खेलले मुलुकलाई नजानिदो गरि अध्याँरो तर्फ उन्मुख गराउदैछ । धेरै समस्या र चुनौतीहरु तेर्सिएको वर्तमान अवस्थामा मुुलुक एक ढिक्का हुनुपर्ने हो । तर दुःखको पक्ष ः मुलुकको राजनीति विभाजित छ , त्यही राजनीतिको रङमा आम जनता पनि विभाजित छन् । एउटा जटिलताको समाधान नखोजे दर्जनौ जटिलताले बाटो खोल्छन् । नयाँ संविधान न परिपक्व बनेको छ नत कार्यान्वयन नै हुन पाएको छ । २०४७ सालको विश्वको नै उत्कृष्ट भनिएको संविधानको समेत सबै धाराको प्रयोग हेरेका नेपाली जनताले कार्यान्वयनको तहमा नपुगेको संविधानको मर्ममा समेत प्रवेश गर्न नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारविरुद्ध चालेको कदमले मुलुकलाई कुन गन्तव्यमा पु¥याउने हो ? त्यस्को जवाफ अनिश्चित नै छ भन्दा फरक नपर्ला । हुनत सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मात्र पेवा होइन नै । सबै दलको हक लाग्नु अस्वभाविक होइन पनि । तर राष्ट्रिय परिवेश भिन्न अवस्थामा छ यतिखेर । नाकावन्दीले थलिएको अर्थतन्त्रमाथि भूकम्पले थपेको भार छ । संविधान कार्यान्वयनको जटिल विषय थाँती छ , संघीयताको वहस चर्कदो छ । तर दलहरु भने सत्ताको खेलमा मात्र केन्द्रित छन । जुन खेलले जनता आजित बनेका छन् । राजनीतिक अन्यौलताले उनीहरुमा मात्र निराशा थपेको छ ।
अब मुलुकको ध्यान व्यवस्थापिका संसद र त्यसपछि शीतल निवास तर्फ केन्द्रित हुने तरखरमा छ । कानून र संविधानको व्याख्या आफ्नै स्वार्थ अनुकुल हुने गरी गरिन थालेका छन् । विदेशी शक्तिहरु निरीह नेपाल र नेपालीको शीरमाथि गीर खेल्न व्यस्त छन् । कस्को स्वार्थले जित्ने हो ? त्यस्मा उसैले खुसी मनाउला । तर नेपाल र नेपालीले भने सधै हार्ने निश्चित छ ।